Location: musha » Kutumira » African Tourism Bhodhi » UNDP Inofema Hupenyu Hutsva Kushanya kweTanzania
Kuedza nesimba kweVashanyi veTanzania kudzoreredza indasitiri yezvekushanya ine mabhiriyoni emadhora, mukati medenda reCovid-19, yakabhadhara mibairo zvakashamisa, nekuda kwerutsigiro rweUnited Nations Development Programme (UNDP).
Pakukwira kwedenda iri, sangano reTanzania Association of Tour Operators (TATO) kuburikidza nerutsigiro rweUNDP yakabatana neHurumende, yakatora matanho akati wandei, zvikaita kuti pave nerubatsiro rwakakura maererano nekuraira kukwikwidzwa kwevashanyi uye kurongerwa kutsva. ramangwana rakajeka reindastiri.
Zvisinei nekurohwa zvehutsinye nedenda iri, huwandu hwazvino kubva kuStatehouse hunoratidza indasitiri yekushanya yakanyora kukura kungangoita zana nemakumi maviri nenhanhatu muzana maererano nehuwandu hwevashanyi muna 126 zvichienzaniswa na2021.
Mumharidzo yavo yekuonekana na2021 nekugamuchira Goredzva ra2022, Mutungamiri weTanzania Samia Suluhu Hassan akati vashanyi miriyoni imwe nemazana mana vakashanyira nyika yakapfuma zviwanikwa muna 1.4 mukati medenda reCovid-2021; zvichienzaniswa ne19 vanoita zororo muna 620,867.
"Izvi zvinoreva kuti muna 2021, kwakave nekuwedzera kwe779,133 vashanyi vakashanyira Tanzania," President Suluhu vakadaro muhurukuro yavo paterevhizheni live nesangano rehurumende reTanzania Broadcasting Corporation, vachiwedzera kuti: "Zvatinotarisira ndezvekuti indasitiri yekushanya irambe ichibudirira. muna 2022 zvichienda mberi,”
"Idzi data rinotaura zvakanyanya pamusoro pezvakanaka zveTATO inotsigirwa neUNDP uye zvirongwa zveHurumende zvave nazvo muindasitiri yezvekushanya," akadaro CEO weTATO, VaSirili Akko, vachiwedzera: "Ndinotenda kuti uku kuchangotanga rwendo rwedu mukuvakazve. zviri nani indasitiri yekushanya inosanganisirwa, inoshingirira, uye inobudirira”.
VaAkko vakatenda zvikuru UNDP, vachiti rutsigiro rwavo rwakauya panguva yakaoma zvikuru munhoroondo yeindasitiri yezvekushanya ichangobva kuitika pamwe nekusagadzikana kwedenda reCovid-19.
Chakakosha pakati pezvirongwa zvakatorwa neTATO pasi perutsigiro rweUNDP muna 2021 kwaive kuronga rwendo rweTravel Agents FAM kuenda kuTanzania munaGunyana 2021 kunoona dunhu rekuchamhembe kwevashanyi muhurongwa hwayo hwekuvapa muono wezvekukwezva kwevashanyi.
TATO yakagadzirawo zvivakwa zvehutano zvakakosha munzvimbo dzakakosha dzekushanya, izvo zvaisanganisira kuve, pakati pezvimwe zvinhu, maamburenzi mana pasi, uye kubvumirana nezvimwe zvipatara kushandisa zvivakwa zvebasa revashanyi kana paine njodzi, uye kubatana nevarapi vanobhururuka. masevhisi mukuda kwayo kudzoreredza kuvimba kwevashanyi.
Kutaura chokwadi, TATO iri pasi peUNDP yakatumira boka rema ambulensi munzvimbo dzinopisa dzekushanya, dzinoti Serengeti neKilimanjaro National parks, Tarangire-Manyara ecosystem, uye Ngorongoro Conservation Area.
Kuburikidza nemari yeUNDP, TATO yakatenga zvakare yaidiwa Personal Protective Equipment (PPE) kuchengetedza vashanyi nevanovashandira pachirwere cheCOVID-19.
TATO yakabatana nehurumende yakapayona kuburitswa kweSeronera, Kogatende, neNtutu Coronavirus nzvimbo dzekuunganidza pakati, kuchamhembe, uye kumabvazuva-maodzanyemba kweSerengeti, zvichiteerana, zvichiita kuti Covid-19 kuyedzwa kuve nyore uye nyore kune vashanyi.
TATO zvakare raive sangano rekutanga kumisa nzvimbo yekudzivirira pazvivakwa zvayo kuti vashandi vayo vepamberi vagamuchire jabs, zvichirerutsa dambudziko rekumira mumitsetse muzvipatara zvehurumende.
Sangano iri rakanga radyidzana nekambani yekuAmerica yeCornersun Destination Marketing Company kusimudzira Tanzania muNorthern America yose mukuyedza kumutsiridza indasitiri yezvekushanya, kukurudzira mamwe mabhizinesi, kuwana zviuru zvemabasa akarasika pamwe nekuwanisa hupfumi mari.
Kuedza kweTATO pakukwirira kwedenda reCCIDID-19 apo nyika yese yakamira yakaita sekutambisa nguva nezvimwe zviwanikwa kune vakawanda vanopokana nebhaibheri vaThomas.
Asi kuedza kwacho kwaita zvakanaka kune vafambi vekunze, kana chirevo cheAfrican Travel and Tourism Association (ATTA) chiri chinhu chingaitwe.
"Nhengo dzedu nevatengi vadzo vari kuenda kuTanzania vakagamuchira zvakanaka nzvimbo dzekuongorora Covid-19 muSerengeti," anonyora mukuru weATTA, VaChris Mears, kune mumwe wake weTATO, VaSirili Akko.
ATTA isangano rinotungamirwa nenhengo dzekutengeserana rinosimudzira kushanya kuAfrica kubva kumativi ese epasi. Inozivikanwa sezwi rekushanya kweAfrica, ATTA inoshanda uye inotsigira mabhizinesi muAfrica, inomiririra vatengi nevatengesi vezvigadzirwa zvekushanya munyika makumi maviri nenomwe dzeAfrica.
VaMears vakati nzvimbo yekuongorora yeSerengeti yakafadza nhengo dzavo nevashanyi, sezvo ichibvumira vafambi kuti vawedzere nguva yavo mumapaki uye kuvadzivirira kushandisa mazuva avo ekufamba kwenguva refu bvunzo dzeCovid-19.
Kudzokera kumba, makiyi evafambisi vekushanyira akasimbisa kuti matanho eTATO atanga chaizvo kusimudzira kubhuka kutsva.
"Isu tanga tichinyoresa kudzokororwa kutsva nevashanyi vangangove vashanyi tichitaura nezve Covid-19 sampuli yekuunganidza nzvimbo kuSerengeti uye kuburitswa kwegomarara, pakati pezvimwe, sezvikonzero zviri kukonzera kufarira kwavo kubhuka safaris," akadaro Nature Responsible Safaris. Managing Director, Muzvare Fransica Masika, vachitsanangura:
“Tinotenda zvikuru basa guru reTATO riri kutungamira nehurumende kuburikidza nerutsigiro rwemari rweUNDP. Tinotenda matanho avo echimbichimbi ekutsigira kupora kweindasitiri pakatarisana nedambudziko reCovid-19. "
Munguva yakasviba zvikuru apo kukanganisa kweCovid-19 kwanga kuri kutonga, kunoratidzwa nekuvharwa kukuru kwemuganho wepasirese, kupaka ndege, kumisa vashandi, uye kuoma mitezo yezviitiko zvehupfumi pakati pemamwe matanho ekudzora nyika yega yega, Tanzania haina kuregererwa.
Nekuda kwekupinda mukati kwebhizinesi rekushanya, indasitiri ndiyo yakanyanya kuomesesa sezvo kubuda kwehutsinye hweCoronavirus kwakakonzera kudonha kwakanyanya kwevashanyi vaisvika muTanzania kubva pavashanyi vanopfuura miriyoni imwe nemazana mashanu muna 1.5 kusvika pa2019 muna 620,867.
Kudonha kwevanosvika kwakakonzera kudonha kwakanyanya kwemari yekuunganidza kusvika kumadhora bhiriyoni 1.7 muna 2020, kubva parekodhi yenguva yese yemadhora mazana maviri nemakumi matanhatu emadhora muna 2.6.
Nekudonha kwe81 muzana mukushanya nekuda kwedenda reCovid-19, mabhizinesi mazhinji akadonha zvichikonzera kurasikirwa kukuru kwemari, kurasikirwa nezvikamu zvitatu kubva muzvina zvemabasa muindasitiri iyi, vangave vashanyi, mahotera, vatungamiriri vevashanyi, vatakuri, vatengesi vezvekudya. , nevatengesi.
Izvi zvakakanganisa zvakanyanya raramo yevakawanda, kunyanya mabhizimusi madiki, madiki uye epakati, vashandi vasina kudzivirirwa, uye mabhizinesi asina kurongwa anosanganisira vechidiki nevakadzi.
Tanzania ndiyo imwe yenzvimbo dzakakosha dzekushanya dzinokwezva vangangosvika miriyoni 1.5 vashanyi vanosiya madhora mabhiriyoni maviri nemazana matanhatu pagore, nekuda kwerenje rayo rinoshamisa, nzvimbo dzinoshamisa dzechisikigo, vanhu vane hushamwari pamwe nekuchengetedza uye kuchengetedza chinhu.
Sezvo chikamu chekushanyirwa chichichinja zvishoma nezvishoma kuenda kumamiriro ekugadzirisa pamwe nenyika dzese, gwaro rekupedzisira reWorld Bank rinokurudzira zviremera kuti zvitarise kusimba kwaro kweramangwana nekugadzirisa matambudziko atora nguva refu anogona kubatsira kuisa Tanzania padanho rekukura repamusoro uye rinosanganisirwa.
Yazvino bhanga reWorld Bank Tanzania Economic Update, Transforming Tourism: Toward a Sustainable, Resilient, and Inclusive Sector inotaridza kushanya sepakati pehupfumi hwenyika, raramo, uye kuderedza hurombo, kunyanya kuvakadzi, vanoumba 72 muzana yevashandi vese mukushanya. sub-sector.
Africa bhangi kambani Covid-19 hurumende Marketing muzvarirwo Serengeti Tanzania ushanyi Bhidhiyo renyika
Chii chinoitika kana iwe ukafa?
Izvi zvinogona kureva dzimwe shanduko dzakagadzirirwa kuvandudza hupenyu muAfrica. MuTanzania, kuvandudzwa kwemamiriro ekudyara. Kuedza kwakawanda kunodiwa kuchengetedza zvipenyu zvemugungwa uye kusiyana-siyana kwezvipenyu zvemumahombekombe.